OnLeaks ekpughere ntụgharị ndị ọzọ nke Xperia Z4 | Gam akporosis
Ka oge na-aga, anyị ga-ahụ mkpanaka tupu ekele ahụ karịa na ngosipụta nke gọọmentị, ọbụlagodi n'ihe banyere Sony. Companylọ ọrụ Japan ahụ ewepụtaghị ọkọlọtọ ya na-esote n'oge Mobile World Congress na a na-atụ anya ka ọnụnọ ya gosipụta tupu oge ọkọchị.
Ma ka oge na-aga, ihe ịtụnanya ahụ apụla n'anya, ihe niile bụ n'ihi ntapu wakporo anyị oge niile. Anyị amaghị nke ọma mgbe a ga-ekwupụta ngwaọrụ mana ihe doro anya bụ na, anyị amatalarị ihe niile gbasara Xperia Z4, kedu ka ndị Japan ga-esi ju anyị anya?
Sony kwesịrị ikwusa Z4 n'oge na-adịghị anya, mana ọ bụ ezie na nke ahụ anaghị abịa na netwọk jupụtara asịrị na leaks nke ụlọ ọrụ ga-eme ama ama. Ihu ohuru a nyere site na profaịlụ a ma ama na Twitter, OnLeaks. Oge a anyi enweghi onyogho nke onyonyo nke onu ogugu, anyi nwere otu ma dika okwu a ma ama si kwuo, onyonyo bara uru otu puku okwu.
Ihu ọma ọ bụ a foto nke n'ihu nke ọnụ ebe anyị pụrụ ịhụ ụfọdụ nke e ji mara na ngwaọrụ ga-enwe dị ka a haziri. Anyị nwere ike ịhụ bọtịnụ on na gbanyụọ, bọtịnụ iji chịkwaa olu ya, yana bọtịnụ mkpuchi na igwefoto. Mkpọchi ndị a ka nọ n'otu ebe karịa nwanne ya nwoke nke Xperia Z3. Ya mere Sony gara n'ihu ịkụ nzọ n'afọ ọzọ ma enweelarị anọ maka ịnwe okpokolo agba na ihuenyo. nwere ike itinye ntakịrị ihe karịa na ọnọdụ imepụta.
Ha na-ekwu na mgbe ihe na-arụ ọrụ ọ ka mma ịhapụ ha otu ha si, yabụ Sony ewerela ya na ọnụ ahịa. Xperia Z4 dị na mpụga ga-adị ka Z3 na obere obere ọdịiche, agbanyeghị nnukwu ọdịiche dị n'etiti ọdụ abụọ a dị n'ime ngwaọrụ ahụ. Na Xperia Z4 ga-etinye a Ngosipụta QHD n'ezie, n'okpuru nhazi Snapdragon 810 si Qualcomm, 4 GB nke RAM na 32 GB nke nchekwa, na igwefoto 20.7 Megapixels. Agbanyeghị na imewe, Sony gara n'ihu ịkụ nzọ n'ahịrị site na afọ anọ gara aga, n'ime anyị na-ahụ oke nkọwa ga-eme ka o sie ike ịsọ mpi nke ndị nrụpụta ndị ọzọ nke oke gam akporo.
Na Barcelona, ​​Sony gosipụtara Xperia Tablet Z4 ma kwuo na ha ga-ekwuputa ọkọlọtọ na-esote tupu Septemba, kpọmkwem n'ọnwa ahụ ka a na-eme IFA na Berlin, yabụ a gaghị atụ anya na ụbọchị ole na ole tupu ha emee ihe yiri ya. omume ma si otú a nwee ike ịnwe ọnụ na nkwụsị gị n'oge emume ngosi a. Gị, Ọ na-amasị gị Xperia Z4 ?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Sony » OnLeaks ekpughere ntụgharị ndị ọzọ nke Xperia Z4
Telegram 2.7 rutere na nkwenye ntinye 2, ndepụta nnọkọ na nyocha njikọ